Kumuu Ahaa Sheykh Rufaaci Dhaahaa Oo Ku Shahiiday Duqeyn Ka Dhacday Dalka Suuriya. – Calamada.com
calamada April 9, 2016 2 min read
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in duqeyn shalay gelinkii dambe ka dhacday Gobolka Idlib ee Waqooyiga dalka Suuriya inuu ku Shahiiday Sheykh Rufaaci Dhaahaa iyo dhowr ruux oo kale oo la saarnaa gaarigii uu la soday.
Sheekha oo u dhashay Dalka Masar waxa uu muddo dheer u xirnaa Nidaamkii kaligii taliska ahaa ee uu Madaxweynaha ka ahaa dalka Masar, waxaana uu u safray dalka Suuriya Sannadkii 2011-kii, kadib markii uu xilka madaxtinimada ee dalkaasi uu qabtay Madaxweynihii la afgembiyay ee Muxamed Mursi.
Â Sheykh Rufaaci Axmed Dhaahaa waxa uu ku dhashay Gobolka Baaswaan ee dalka Masar Sannadkii 1953-dii, waxa uu dowr weyn ka ciyaaray aas aaskii Jamaacadii islaamiga aheyd ee dalka Masar. Sanadkii 1981 ayaa Maxkamad Meliteri waxay amar ku bixisay in la xiro, isagoo loo heystay dacwado ay ka mid yihiin abaabulka iyo isku dubba ridka Urur Jihaadi ah iyo dacwado kale oo ay ka mid yihiin inuu ka hor yimid Dowladdii Meliteriga aheyd ee dalkaasi ka talineysay.
Shan kadib markii Xabsiga laga sii daayay waxa uu u safray dalka Afghanistan, waxa uuna halkaas kula soo kulmay hoggaankii Jihaadka ee Wakhtigaasi sida Sheykh Cabdalla Cazzaam, Sheykh Usaama Bin Laadin iyo Sheykh Dr Ayman Al-Dawaahiri.
Markii uu Afghanistan kasoo noqday waxa uu u safarro ku tagay Wadamo ka tirsan Yurub, waxaana Sheekhu uu ugu dambeyntii noqday Madaxii Golaha Shuurada ee Jamaacadii islaamiga aheyd ee dalka Masar. Sannadkii 1997-dii waxa uu ka mid ahaa Xubnihii ka tirsanaa Jamaacadaas ee diiday in hubka la dhigo, isagoo ku dhagganaa Mowqifkiisa ahaa in hubka la adeegado si loo rido Nidaamyada daba dhilifyada ah ee aan Sharciga islaamka waxba ku maamuleyn.
Booliiska Caalamiga ah ee Interpol oo kaashanaya Sirdoonka Dowlado kale ayaa Sannadkii 2001-dii waxay Sheekha ka qabteen Garoonka diyaaradaha magaalada Dimishiq, waxaana lagu soo wareejiyay Dowladda Masar, waxaana xabsiga laga sii daayay Sannadkii 2011-kii markii ay billowdeen Kacdoonnadii Guâ€™ga Carabta.
Duqeyntan lagu dilay Sheekha waxay imaaneysaa Seddax maalmood kadib markii duqeyn tan oo kale ah oo ka dhacday Gobolka Idlib ee Waqooyiga dalka Suuriya lagu dilay Afhayeenkii hore ee Jabhatu Nusrah Sheykh Abuu Farraas As-Suuri iyo Qaa;idkii Melliteriga ee Jamaacadaasi Sheykh Abuu Hammaam As-Suuri.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 01-07-1437 Hijri.
Next: Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Deegaanka Ceelbaraf Ee Shabeelada Dhexe.